‘हिन्दु भोट’ तान्न तीर्थ यात्रामा मोदी–राहुल? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘हिन्दु भोट’ तान्न तीर्थ यात्रामा मोदी–राहुल?
मणि दाहाल काठमाडौँ भदौ १६
भारतका प्रधानमन्त्री तथा भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी बिमस्टेक सम्मलेन सकेर नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको उद्घाटन र पशुपतिनाथको दर्शन गरी शुक्रबार साँझ दिल्ली फर्किए।
मोदी भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानमा दिल्ली उड्नु केही घण्टाअघि नै विपक्षी दलका नेता भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी काठमाडौं ओर्ले। सामान्यतः मोदी जस्तो मन्दिर चहार्दै नहिंड्ने राहुलले शनिबार बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्ने चर्चा समेत चल्यो। कांग्रेसको अध्यक्ष भएपछि संभवतः उनको यो नै पहिलो नेपाल यात्रा हो।
शनिबार नै राहुल कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्न तिब्बततर्फ लाग्नेछन्।
प्रधानमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीकै शैलीमा विपक्षी नेता गान्धी किन यसरी धार्मिक यात्रामा निस्के? अझ उनी पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गरी किन नेपाल आए? मोदी र गान्धीको पछिल्लो धार्मिक यात्रा खासगरी भारतीय लोकसभाको आसन्न निर्वाचनसँग जोडिएको छ। भारतको बहुसंख्यक हिन्दु जनमत आफुतिर आकर्षित गर्न मोदी र गान्धी दुबै हिन्दु धार्मिक स्थल धाउन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
१४–१५ भदौमा भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा मोदी काठमाडौं आउँदै थिए। यही बेला उनले जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्न नसक्ने होइनन्। तर, विशुद्ध धार्मिक भ्रमणका लागि मोदी २८–२९ बैशाखमा नेपाल आए, जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको भ्रमण पनि गरे। सुरुमा काठमाडौं आएर जनकपुर र मुक्तिनाथ जाने भनेपनि अन्तिम समयमा उनी जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आइपुगे।
मोदी कट्टर हिन्दुवादी नेता हुन्। त्यसैले, जनकपुर र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमणलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि उनको भ्रमणको भित्री उद्देश्य भने राजनीतिक नै रहेको मानिन्छ। ४ बर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा मोदीले विकास र संमृद्धिको जुन सपना बाँडेका थिए, ती पुरा हुनसकेका छैनन्। त्यसैले, आसन्न चुनावमा उनले धर्मको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। र, खासगरी हिन्दु जनमतलाई भोट बैंकमा परिणत गर्नुछ।
बैशाख अन्तिम साता भएको मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमण आगामी चुनावमा हिन्दु जनमत कायम राख्न हो भन्ने टिप्पणी उतिबेलै दिल्लीमा भएकै हो। हुनपनि लोकसभा चुनावमा भारतका हिन्दीभाषी उत्तरी राज्यहरु उत्तर प्रदेश र बिहार निर्णायक छन्। ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा उत्तर प्रदेशमा ८० सिट छन् भने बिहारमा ४० सिट।
भाजपाले उत्तर प्रदेश र बिहारमा विजय हासिल गर्न सक्यो भने निर्वाचनमा बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ। उत्तर प्रदेश भाजपा अनुकूल भएपनि बिहार चाहिँ भाजपाका लागि त्यति अनुकूल छैन। त्यसैले बिहार नजिकको हिन्दु नगर जनकपुर आएर उनले उत्तरी भारतमा पर्ने बिहारको जनमतलाई प्रभावमा पार्न खोजेका थिए। मुक्तिनाथ जानुको उद्देश्य चाहिँ दक्षिणी भारतको हिन्दू जनमतलाई प्रभाव पार्नु थियो। बर्षेनी हजारौंको संख्यामा दक्षिण भारतका हिन्दु तीर्थयात्री मुक्तिनाथ जाने गरेका छन्। त्यसैले, आफुपनि मुक्तिनाथ जाँदा दक्षिण भारतको हिन्दु जनमतको समर्थन पाउने मोदीको विश्लेषण चुनावी राजनीतिका दृष्टिले सही नै हो।
विश्वभरका हिन्दूहरुले महत्वपूर्ण मानेका नेपालका पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ पुगेर हिन्दु जनमतको समर्थन कायम राखिरहने मोदीको चालबाजी बुझेका गान्धीले पनि हिन्दु जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिश थालेका छन्, काठमाडौं हुँदै कैलाश मानसरोबरको यात्रा तय गरेर।
मानसरोवर जाने क्रममा राहुलले काठमाडौंलाई एकरातको मुकाम बनाउनु त्यसैको उपज हो। गत बैशाखमा भएको दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटका विधानसभाको चुनावका क्रममा गान्धीले आफु शिवभक्त भएको घोषणा गर्दै मानसरोवरको यात्रा गर्ने बताएका थिए। त्यहीबेला नै हो, कर्नाटकाको चुनावलाई प्रभावित गर्न मोदीले नेपालको धार्मिक भ्रमण गरेको पनि। मतदान सुरु हुनुअघिको ३ दिनको मौन अवधिका क्रममा उनी नेपालको धार्मिक भ्रमणमा आएका थिए। पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको भ्रमण गरेर मोदीले उतिबेला कर्नाटकाको हिन्दू–धार्मिक जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए।
तर, कर्नाटकाको चुनाव मोदीले भनेजस्तो भएन। भाजपा त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्यो तर, सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सकेन। फलत प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थनमा जनता दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
भाजपाले कांग्रेसलाई सदैब हिन्दु विरोधी दलका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, जसको असर पछिल्ला केही बर्षमा देखिन थालेको छ। त्यसैले पछिल्लो समय भाजपाले लगाएको यो आरोप चिर्ने हरसम्भव प्रयास कांग्रेसमा गान्धी परिवारले गर्दै आएको छ।
भाजपाले लगाएको आरोप चिर्न गान्धीले विभिन्न हिन्दू मठ–मन्दिरमा दर्शन र पूजाआज गर्ने क्रम बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातको विधानसभा चुनावबाट गान्धीले यो क्रम बढाएका हुन्।
पचासको दशकमा निर्माण भएको ‘हिन्दु कोड बिल’ देखि नै कांग्रेसमाथि हिन्दूवादीहरुले हिन्दु विरोधीको आरोप लगाउन थालेका हुन्। गान्धी परिवारका बरिष्ठ सदस्यहरुले गैर–हिन्दुसँग विवाह गरेको घटनालाई पनि विरोधीहरुले कांग्रेसलाई हिन्दु विरोधी देखाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
राहुलकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीले फिरोज जहाँगिरसँग विवाह गरेकी थिइन्, जो पछि इन्दिरासँग विहे गरेपछि फिरोज गान्धीका रुपमा चिनिए। राहुलका पिता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले इटालियन युवती सोनियासँग विवाह गरे, जो विहेअघि क्रिश्चियन धर्मावलम्बी थिइन्।
सुरु सुरुमा ‘कांग्रेस हिन्दु विरोधी हो’ भन्ने भाजपाको आरोप निश्प्रभावी देखिएपनि पछिल्लो समय यही आरोपले कांग्रेस अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ। चुनावमा विजयका लागि अरुपनि अस्त्र चाहिएलान्, तर आफूमाथि लागेको यो आरोपलाई गलत सावित गर्नुपर्ने चुनौति कांग्रेस र गान्धी परिवारलाई छ।
आफुमाथि लागेको आरोपलाई निश्प्रभावी पारेपछि मात्र उसले भाजपा र मोदीमाथि धावा बोल्न सक्नेछ। चुनावमा विजय हासिल गर्न प्रतिरक्षा र आक्रमण दुबैको जरुरत पर्छ। गान्धी परिवार भाजपाले लगाएको हिन्दु विरोधीको आरोपको व्यवहारिक प्रतिरक्षा गर्ने चरणमा देखिन्छ।
आगामी बैशाखसम्ममा भारतमा लोकसभा चुनाव हुनेछ। त्यसअघि हाल भाजपाको प्रदेश सरकार रहेका राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ। लोकसभा चुनावमा क्षेत्रीय दलहरुसँग गठबन्धन गर्ने तयारीमा रहेको छ कांग्रेस। त्यसैले, तीन वटा प्रदेशका विधानसभा चुनावमा भाजपा–कांग्रेसबीच सीधा टक्कर हुने अनुमान छ।
भारतको १ अर्ब ३२ करोड जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत हिन्दु छन्। भाजपाले आगामी चुनावमा पनि कांग्रेसलाई हिन्दु विरोधी र आफुलाई हिन्दुवादी दलका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
भाजपाले लगाउने गैर हिन्दुको आरोप मेटाउने उद्देश्य राखेर सायद राहुल गान्धी मानसरोवरको यात्रा गर्दैछन्।
(यो सामाग्री शनिबार अपरान्ह १ बजे अपडेट गरिएको छ)
प्रकाशित १६ भदौ २०७५, शनिबार | 2018-09-01 07:22:24